Jehovha, Muponesi ane simba
Vanhu vakaipa vakaita senyoka (3)
Vanhu vanoda zvemhirizhonga vachafa (11)
Kumutungamiriri. Rwiyo rwaDhavhidhi. 140 Jehovha, ndinunureiwo pavarume vakaipa;Ndidzivirirei pavarume vanoda zvemhirizhonga,+ 2 Vaya vanoronga zvinhu zvakaipa mumwoyo mavo+Uye vanoswera vachirwisanisa vanhu. 3 Vanorodza rurimi rwavo kuti ruve serwenyoka;+Uturu hwechiva huri mumiromo yavo.+ (Sera) 4 Ndidzivirireiwo Jehovha, mumaoko evakaipa;+Ndichengetedzei pavarume vanoda zvemhirizhonga,Vaya vanoronga kundipiringisha. 5 Vanozvikudza vanovanza chiteyeso kuti vandibate;Vanoshandisa tambo kutambanudza mambure padivi penzira.+ Vanondiisira misungo.+ (Sera) 6 Ndinoti kuna Jehovha: “Ndimi Mwari wangu. Teererai, haiwa Jehovha, kuchemera kwangu kubatsirwa.”+ 7 Haiwa Jehovha Changamire Ishe, Muponesi wangu ane simba,Munovharidzira musoro wangu pazuva rehondo.+ 8 Haiwa Jehovha, musapa vanhu vakaipa zvavanoda. Musarega zvirongwa zvavo zvichibudirira, kuti vasakwidziridzwa.+ (Sera) 9 Misoro yevaya vanondikombaNgaifukidzwe nezvinhu zvakaipa zvinotaurwa nemiromo yavo.+ 10 Mazimbe emoto ngaanaye pavari.+ Ngavakandwe mumoto,Mumakomba akadzika*+ kuti vasabudamo zvakare. 11 Anotaura mashoko anosvibisa zita remumwe ngaashaye nzvimbo panyika.+ Zvakaipa ngazvitevere varume vanoda zvemhirizhonga uye ngazvivauraye. 12 Ndinoziva kuti Jehovha achamiririra vakaderera,Otonga nyaya dzevarombo zvakarurama.+ 13 Chokwadi vakarurama vachaonga zita renyu;Vakarurama vachagara pamberi penyu.+
^ Kana kuti “Mumakomba ane mvura.”